Koonfur Afrika oo meedaarta ka dhigaysa luuqad rasmi ah - BBC News Somali
Lahaanshaha sawirka TALKSIGN
Image caption Dadka dhagaha la'
Dowladda Koonfur Afrika ayaa qorsheyneysa in meedaarta ama qaabka ay isku af gartaan dadka dhagaha la' laga dhigo afka 12aad ee rasmiga ah, waxayna Koonfur Afrika noqon doontaa dalal tiro yar oo Afrikaan ah oo sidaasi yeelay.
Talaabadan ayaa ka dambeysey kadib markii guddiga dastuurka ee baarlamaanka dalkaasi uu soo jeediyey in wax laga badalo dastuurka, laguna daro in meedaarta ka mid tahay afafka rasmiga ah ee dalkaasi looga hadlo. Horey waxaa u jirey 11 af oo rasmi ah oo dalkaasi looga hadlo.
Bulshada dhagaha la' ayaa intii muddo ahba olole ugu jirtey in meedaarta laga dhigo af rasmi ah. balse baarlamaanka ayay tahay in uu cod ku meelmariyo ka hor inta aanan la dhaqangalinin.
Ninka lagu magacaabo Sibusiso Nkosi oo ka tirsan ururka afafka dalkaasi ee marka magaciisa lasoo gaabiyo yahay Pan SALB oo ka hadlay arrintan ayaa yiri "Haddii laga dhigo af rasmi ah waxa ay taasi micnaheedu noqoneysaa in iskuulaadka lagu dhigo, sidoo kale wasaaradaha kala duwan ee dowladana waxa ay ku qasbanaan doonaan in ay keenaan turjumaano u af celiya dadka dhagaha la' ee ay adeegyada u fidinayaan".
Haddii la meelmariyo isbadalkan waxaa xitaa dhici karta in shirkadaha gaarka loo leeyahay ay meelmariyaan talaabooyin ay kula jaanqaadayaan isbadalka.
Lahaanshaha sawirka SA Parliament
Image caption Madaxweyne ku xigeenka Koonfur Afrika Ramaphosa oo ka hadlaya baarlamaanka
Hadda waa la isticmaalaa meedaarta , waxaana aad u adeegsada taleefishinada iyo xitaa marka ay jiraan munaasabadaha waaweyn, halkaasi oo qof garanaya meedaarta uu dadka dhagaha la' u turjumaano waxa la sheegayo.